Izibopho gazodymozaschitnika. Gazodymozaschitnaya isevisi
Umthetho, Impilo nokuphepha
Phakathi imililo ngokuvamile eba isimo ngempela okungekuhle lapho kunzima ukusebenza ngaphandle Ukuvikelwa zokuphefumula. kwakhiwa ngoLwesithathu Unbreathable is ngokuqondene indawo kagwayi. Futhi uma udinga i ukuthuthwa kwabantu ngenxa yengozi esiphuthumayo lwabantu kusuka esakhiweni esivuthayo noma umlilo liyadingeka unqobe ngesakhiwo esikhulu ngentuthu, iqala gazodymozaschitnaya inkonzo. Kuyinto ukusebenza ezimweni ezinjalo, umsebenzi gazodymozaschitniki.
Umsebenzi oyinhloko ukwenza isethi gazodymozaschitnika GDZS umsebenzi endaweni asifanele ukuphefumula. Uyabika umkhuzi izinga lesevisi. Certification gazodymozaschitnikov sihamba okusekelwe empilweni yabo engokwengqondo, futhi ngokomzimba, kanye nezinye izinto eziningi. Kufanele athobele yonke imithetho ukusebenza kule RPE futhi unquestioningly ukulalela imiyalo umlawuli wakhe. Futhi umsebenzi kabani ukuletha ulwazi isibalo sabantu osizini, nazo zonke izimo exhunywe nalesi simo futhi indawo yabo.
Gazodymozaschitnikom kungenzeka umuntu likwazi ukufinyelela ukusetshenziswa RPE. Lena ilawulwe inkonzo abavamile umlilo, nababusi bazo, futhi abafundi MOE. ama-apharathasi Breathing, okuyinto ekhishwe abasebenzi Kumele unikeze umphumela zokuzivikela imizuzu okungenani 240.
imisebenzi Okujwayelekile gazodymozaschitnika
Phakathi kwemisebenzi, ummeleli mkhakha ukwenza imisebenzi ethile. Kukhona Imithetho jikelele for zonke izisebenzi inkonzo. Phakathi kwabo kufanele basho lokhu okulandelayo:
Umuntu kufanele kube atholakale umsebenzi ophathelene ucime imililo imvelo okungukuthi esiwuhogelayo ngokuphelele ngaso sonke isikhathi. Kulokhu, kufanele sisebenze ekuthuthukiseni ukuqina ngokomzimba kumele kwenziwe ekhethekile abanezinkinga ezithile ezingaba nomthelela ukulungiselela gazodymozaschitnikov.
Enesibopho ulandele lobuchwepheshe ukuseviswa RPE kanye nanoma yimuphi omunye imishini noma ithuluzi umlilo ukuthi kunikezelwe kuye. Ngaphezu kwalokho, enesibopho athwale yonke imishini yesondlo ngesikhathi.
Yena unesibopho enifeza izibalo umoya-mpilo imithombo kwesikhathi okungase mnyango futhi imishini yayo akhiwe endaweni asihambisani ukuphefumula.
Imisebenzi gazodymozaschitnika kuhlanganisa ikhono ukunikeza usizo lokuqala abantu abaye ehlaselwe umlilo.
Enesibopho njalo bathuthukise amakhono abo njengoba abamelwe sezinga ngesikhathi umsebenzi endaweni asifanele ukuphefumula.
Imisebenzi umsebenzi ku ukuziphatha imisebenzi
Lapho kubalulekile ukuba ukucima, kukhona imisebenzi ekhethekile gazodymozaschitnika, phakathi okuyinto ivelele:
Ulwazi izinkinga zabo njengoba izinga lesevisi, bese kokulalela ngokungathandabuzi kumlawuli.
Ukwazi lapho okuthunyelwe ukuphepha kanye yokuhlola eliseduze.
Enesibopho ngokuqinile ukugcina indlela njengoba isixhumanisi amasevisi ngaphambilini bavumelana, kanye acabangele imithetho yomsebenzi nge imishini evikela yomoya ngenxa yentuthu.
Akanalo unelungelo lokushiya indawo yabo yomsebenzi ngaphandle kwemvume umlawuli GDZ inkonzo. Lokho kungumsebenzi gazodymozaschitnika oda kanye nokuqaliswa kwalo afakiwe kwasekuqaleni.
Yena unesibopho ethungatha isimo sishintshe kusuka isixhumanisi womgwaqo, isidingo acabangele isimo isakhiwo isakhiwo kanye endleleni, futhi endaweni lapho umsebenzi ngokwalo ngqo aphethwe.
Ngokuhamba ukudlula endaweni eyingozi, kumelwe sikhumbule ngokucacile umzila oluhamba isixhumanisi inkonzo.
Eduze ukuqapha idatha ingcindezi futhi umoya-mpilo kule imishini, okuyinto anakho.
Akakwazi ukusebenzisa valve ukuphepha ngokungadingekile.
Kusukela nesiphetho ukusetshenziswa RPE kufanele sigcwaliswe kuphela oda umlawuli indiza.
Bika umkhuzi imvelo futhi izinguquko zalo, unikezwa ukwehluleka ukuvikela imishini futhi esimweni saso ngesikhathi ekwenzeni imisebenzi, kuhlanganise izinzwa zokunambitha, ikhanda kanye iphika, bese unquestioningly ulandele imiyalo.
Izibopho gazodymozaschitnika usebenzisa DASK
Kwezinye izimo, lapho lesifishane lungafanelekile ngokuphelele ukuphefumula, gazodymozaschitnik angasebenzisa DASK futhi enze imisebenzi elandelayo:
Kuphela ngaphandle enze okuzivuselela esikhundleni cartridges noma umoya-mpilo amathangi e imishini.
Cishe kanye ngehora, Kumelwe asuse umswakama aqoqana zezakhi ebhokisini.
Uma kudingeka, kufanele usebenzise dlula, okusho isisu imishini, usebenzisa valve eziphuthumayo.
Uma ukupholisa valve kukhona okuyiphutha, isisebenzi sikaHulumeni kufanele phusha amashubhu expiratory futhi inspiratory nge isinyathelo esifanele.
Uma umsebenzi senzeka emoyeni, okuyinto sub-zero okushisa, it has ukuba afeze imishini ukushintsha kuphela endaweni evuthayo (ezifana imoto noma emnyango cab yendlu), ngaphezu, kumele kusetshenziswe kits, ifakwe Ukuvikelwa ezishisayo.
Uma Isisebenzi saqaphela ukungasebenzi imishini, ke kumele ngokushesha sazise umlawuli, bese senza kuphela imiyalo yakhe.
OKUVUMELEKILE umthamo ngemisebe ngoba abantu
Ejele Alcatraz - isiqhingi sisuka lapho ukubaleka
Umlilo Isihlangu isitoreji izindlela ngokurhaba
Izidingo Fire ukuphepha yezinhlangano
Amasignali lapho kunesimo esibi International: amacebiso awusizo
Fire Wall: incazelo, izinhlobo, futhi idivayisi izinhlobo
Amalungiselelo ebusika: zifakwe emanzini anosawoti asparagus (iresiphi)
Izitshalo potted: iziphi, yiziphi izinhlobo ezikhona
Isobho Cold nge kefir - ezimbalwa ongakhetha esihlwabusayo
Locus lokulawula, amafomu yayo futhi ukubonakaliswa
Sikwenza kanjani lokhu ukusebenza ebalisisiwe ka wehlelwe
Imihlobo yemibuzo. Imibuzo levalekile. izibonelo
Eyizigidigidi ezingu: i Shellac kuhlukile gel sula?
Testosterone Izithako kungaba yingozi?
Aphumule Krasnoyarsk. izikhungo nezokungcebeleka bonke bathanda futhi amabhajethi